Electronic Pet Dog Dog Bark Shock Collar mpamatsy sy mpanamboatra - orinasa Shina - Shenzhen TIZE Technology Co., ltd.
Home > Products > Tsy misy bark Collar > Ny bateria tsy namboarina amboaram-bokatra > Elektronika biby kely alika biby fiompy biby fiompy
Izahay dia mamatsy biby fiompy alika henjehin'ireo alika mpanafatra .Nanao mpamokatra sy mpanondrana arak'asa izahay, napetraka tamin'ny Jan.2011, orinasa 2600 metatra toradroa, mpiasa 120, manana fahaiza-manao fampandrosoana sy fikarohana, nanolo-tena ho tonga orinasa avo lenta avo indrindra. mpamatsy biby fiompy SGS & BV nitazom-bidy ny mpamatsy an'i Sina. Vahaingo ny fenitra iraisam-pirenena CE ROHS. Izahay dia afaka manome ny mpitiavana sy ny biby fiompiny amin'ny kalitao lafo vidy sy lafo vidy, izay manarona ny fiainany, ny asa sy ny fialam-boly. Manantena izahay fa lasa mpiara-miasa maharitra aminao any Chine ianao.
1.Product Introduction of Elektronika biby kely alika biby fiompy biby fiompy
Ny gorodon-tsetran'ny volon-tsika dia mety kokoa noho ireo fitaovana lavitra miasa. Nihetsika avy hatrany teo amin'ny fandehanana fiara. Afatory fotsiny ny alikanao amin'ny alàlan'ny fitaovana fampiatoana ajanony ary ho hitan'ny alikanao fa tsy tsara ny fanakorontana. Amin'ny farany dia tsy ilainao ny vozon-tranonjaza, apetraho ary asaivo ny kirarinao. Ho lasa mpankatò ho azy ny alikanao
2.Product Parameter (Specification) of Elektronika biby kely alika biby fiompy biby fiompy
Anarana amin'ny zavatra Elektronika biby fiompy alika henjana
Item No. TZ-PET665S
-Press + - bokotra hanitsiana ny fahatsapan-tena
* Fandraisana an-tranonkala polyester avo lenta miaraka amina kofehy refesina 2
* Ny takelakao dia azo atao pirinty eo amin'ny voaridy
7. Mandaitra amin'ny alika manomboka amin'ny 8 ka hatramin'ny 50kg.
9. Ny fehikibo polyester mainty avo lenta miaraka amina tapa-2 reflexina, manamboatra amin'ny 20 ~ 55cm
Size Haben'ny sokajy: 6,3 * 3.5 * 3.5cm (2.48 * 1.38 * 1.38 santimetatra)
Boaty fanomezana: 8 * 3,5 * 9cm (3.15 * 1,38 * 3.55inch)
Fomba: 47 X 36 X 23CM
(18,5 * 14,18 * 9.061inch)
1 x Fehin-kibo miaraka amina tapa-2 taratra;
1 x 6V Batterie;
Jiro Fahazavana 1;
1 x Boky Torolàlana
3.Product Feature And Application of Elektronika biby kely alika biby fiompy biby fiompy
Ny fampiasana ny angady fampiofanana dia tsy voafetra amin'ny olana toy ny fihoaram-pefy amin'ny sakafo na hitsambikina. Raha ny alikanao dia mihanaka be loatra, dia misy ny orona any, izay natao manokana hanampiana azy io. Ny tianay dia avy amin'ny TIZE, izay manome valin-kafatra amin'ny alikanao raha vantany vao mibontsina izy ireo. Tsy tokony hampiasa transmiter 'ny kitroka fantatry ny kitroka rehefa mitranga ny fandehanana, ary mandefa famantarana tsy manimba izay ho tsapan'ny alikanao.
4.Product Details of Elektronika biby kely alika biby fiompy biby fiompy
DURABLE SY SLEEK DESIGN - Na dia ny alika kely aza afaka mivezivezy, ka ny taorinanay no miorina. Ny unit sensor sy shock shock dia vita amin'ny plastika matevina vita amin'ny plastika matevina ary ny kofehy dia misy kofehy azo amboarina vita amin'ny Nylon mahafinaritra.
5.Product Qualification of Elektronika biby kely alika biby fiompy biby fiompy
6.Deliver,Shipping And Serving of Elektronika biby kely alika biby fiompy biby fiompy
Hot Tags: Elektronika biby fiompy biby fiompy biby fiompy kely any Shina, Shina, mpanamboatra, mpamatsy, trano, vita manokana, fivarotana, mora vidy, mora indrindra, famarotana, Quotation, vidiny, pricelist
Dog Bark CollarMandaitra ary olombelona amin ny vozon-dohaza famatsiana alika